Version 0.3.7 – Fahano izay homana
Desambra 6, 2009 amin'ny tolotra 3 Comments
Vaovao io dikan-mametraka fanamafisana amin'ny fanitsiana ny RSS XML Feeds. Toe-javatra toy ny GUID sy ny teny tsara dia ankehitriny nametraka. Te hisaotra Kevin Hart noho ny fanampiana sy ny fanohanana amin'ny famantsihana ireo olana. Fanatsarana hafa dia natao tamin'ny parser izay hanaisotra ny sasany alefan'ireo andian-teny avy nadika (toy ny [….]).
Toy ny mahazatra – jereo ny feno fiovana vatan-kazo.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: tsy ampy taona, fanafahana, RSS, WordPress plugin